महिनावारीबाट थाहा पाउन सक्छिन्, बाँझोपना छ कि छैन ? - बडिमालिका खबर
बाझोपन ! यो शब्दले संभवत सबैभन्दा बढी महिलालाई झस्काउने गर्छ । किनभने हरेक महिला प्रसव-पीडाको अनुभव लिन चाहन्छन् । सन्तान-सुखको अपेक्षा राख्छन् । आफ्नै कोखबाट जन्मिएको बच्चालाई काखमा खेलाउने आकंक्षा राख्छन् ।
यस्तो अवस्थामा जब आफु सन्तान जन्माउन असक्षम छु भन्ने वोध हुन्छ, त्यो कुरा कुनैपनि महिलाले सहजै पचाउन सक्दैन ।
तर, पचाउनैपर्ने वाध्यता आइलाग्छ कहिले काहीँ । किनभने कति महिलामा बाँझोपनको समस्या हुन्छ । किन बाँझोपन हुन्छ ? यसमा एउटा मात्र जवाफले पुग्दैन । कारण अनेक हुनसक्छ । यद्यपी आफुमा बाँझोपन भए, नभएको संकेत भने उनीहरुले मासिक स्रावकै क्रममा थाहा पाउन सक्छन् ।
यसका लागि महिलाहरुले महिनावारीका क्रममा हुने मासिक चक्रबारे ध्यान दिन जरुरी छ ।
सुखमय यौन जीवनका लागि ………………..।